Soo dejiso waraaqaha derbiga ee Razer Telefoonka cusub 2 | Androidsis
Wax yar usbuuc ka hor, soo saaraha qalabka ciyaaraha Razer, wuxuu soo bandhigay jiilka labaad ee Razer Phone, oo ah terminal na tusaya sida ugubnimada ugu quruxda badan, isbeddelka booska labada kamaradood ee dambe, inta aan gudaha ku jirno, waxaan helnaa processor-ka Qualcomm ee Snapdragon 845, halkii laga heli lahaa 835 jiilkii hore.
Riwaayad kale oo ay soo bandhigeen jiilka labaad ee terminalkan, sida caadada u ah taleefannada casriga ah ee cusub ee suuqa ku dhaca, waxaa laga helayaa waraaqaha, darbiyada loogu talagalay in lagu muujiyo tayada aaladaha tikniyoolajiyaddu na siiso. Haddii aad rabto soo dejiso sawirka cusub ee Razer Phone 2, ka dib waxaan sharaxeynaa sida loo sameeyo.
Si aad u soo dejiso sawirka cusub ee Razer Phone 2, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah jooji xiriirka Imgur ee soo socda meesha aad gacantaada ku hayso. Laakiin si aan wax kuugu fududaado, laga bilaabo Androidsis waxaan ku dhibsanay soo dejiso oo adigana u diyaari si aad si deg deg ah oo fudud u soo degsan karto.
Waraaqaha waraaqaha ee Razer Phone 2, 9 gaar ahaan, waxay kujiraan xalkooda hooyo, 2.560 x 1.900 pixels, si aad ugu adeegsan kartid goob walba oo leh shaashad shaashad sare ama hoose oo aan dhibaato lahayn.
Waqtigan xaadirka ah, jiilka labaad ee Razer Phone ayaan wali laga heli karin websaydhka Isbaanishka Razer, halkaas oo jiilkii hore ay wali iibinayaan, marka ma xaqiijin karno qiimaha ugu dambeeya wuxuu ahaan doonaa iyo goorta la heli doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Soo dejiso waraaqaha ranjiga cusub ee Razer Phone 2